ပူပူလေးမှ စားတတ်၊သောက်တတ်တယ်ဆိုသူတွေ သတိထား! - Page 30 of 51 - Hello Sayarwon
ပူပူလေးမှ စားတတ်၊သောက်တတ်တယ်ဆိုသူတွေ သတိထား!
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 07/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကော်ဖီေသာက်ရင် ပူပူလေးမှကြိုက်တယ်၊ လက်ဖက်ရည်ပူပူချိုချိုလေး ခံတွင်းတွေ့လိုက်တာဆိုတဲ့ သူလေးတွေ သတိထားနော်။ အစားအစာပူပူနွေးနွေးစားပါဆိုပေမယ့် အရမ်းပူနေရင်တော့ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးရှိလာဖို့ ရှိနေပါတယ်နော်။ အရမ်းပူတုန်းမှာစားလိုက်တာက လျှာကျက်သွားလို့ အရသာခံရတာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရုံလောက်ပေါ့ ဘာတွေများဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲလို့ တွေးနေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
အရမ်းပူတဲ့အစားအစာတွေ၊ လက်ဖက်ရည်ပူပူ၊ရေနွေးပူပူသောက်တတ်သူတွေက အစာရေမျိုကင်ဆြာဖစ်နိုင်ခြေပိုများနေပါတယ်နော်။ အမေရိကန် ကင်ဆာ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စစ်တမ်းအရ အစာရေမျိုကင်ဆာခံစားရသူအရေအတွက်က ၁၇၆၅၀ ဦးတိုးလာခဲ့ပြီး အစာရေမျိုကင်ဆာကြောင့် အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမျာ လူဦးရေ ၁၆၀၀၀ ဦးလောက်သေဆုံးနိုင်တယ်၊လို့ သိရပါတယ်။
အစာရေမျိုကင်ဆာရှိသူတွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာရောဂါရှိတယ်လို့ သိရှိရပြီးနောက် ၅ နှစ်အကြာမှာသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အစာရေမျိုကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ အများကြီးပါ။ အစာခြေရည်ြပန်ဆန်တက်တာကြောင့် အစာရေမျိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလိုပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေ အစားများပြီး သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အစားနည်းတာကြောင့် အစာရေမျိုကင်ဆာဖြစ်ရတာပါ။
သုတေသီတွေမကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရကတော့ အမြဲလိုလို ခပ်ပူပူအရာတွေကို စားတာ ရေနွေးပူပူ၊ ဟင်းရည်ပူပူတွေသောက်တာကလည်း အစာရေမျိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
လေ့လာမှုအတွင်း အသက် ၄၀ ကနေ ၇၅ နှစ်အရွယ် လူအယောက် ၅၀၀၀၀ ကျော်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်နဲ့ တစ်လကြာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအတွင်း လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူ ၃၁၇ ဦးက အစာရေမျိုကင်ဆာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
သုတေသီတွေက အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထက်ရှိနေတဲ့ အရမ်းပူတဲ့သောက်စရာတွေကိုသောက်သုံးတာက အစာရေမျိုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောင် ခပ်နွေးနွေးအနေအထားမှာသာ စားသုံးသင့်တာလို့ဆိုပါတယ်။ အရမ်းပူတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီအထက်ရှိနေတဲ့သောက်စရာတွေကို တစ်နေ့ကို ၇၀၀ မီလီလီတာသောက်သုံးသူတွေက အခြားသူတွေထက် အစာရေမျိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေတယ်။ လို့လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရသိရှိရပါတယ်၊ လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ အရမ်းပူတဲ့အစားအစာတွေကို မစားသုံးခင်မှာ အပူချိန်ကို ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံးအအေးခံပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင် အစားအစာတွေကို ပူပူလောလောမစားပါနဲ့။ရေနွေးကြမ်းကစလို့ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဟင်းရည်အဆုံး အကုန်လုံးကို အအေးခံပြီးမှာသောက်ပါ။ အအေးခံဆိုလို့ လုံးဝအေးစက်သွားတဲ့အထိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ခပ်နွေးနွေးလေးဆိုလည်း အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
အစားတစ်လုတ်ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်မှာ ထိခိုက်တာတွေမဖြစ်လာဖို့ အရမ်းပူတာတွေမစားဘဲ သင့်တင့်တဲ့အပူချိန်မှာပဲ အရသာရှိရှိလေးစားလိုက်ပါနော်။ အရမ်းပူတာမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တောင် သတိလေးနဲ့ယှဉ်လို့ စားသုံးပေးပါ။ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်း ပူတာမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တောင် အရမ်းမပူစေဖို့ သတိထားပေးပါနော်။ ကော်ဖီပူပူ၊ လက်ဖက်ရည်ပူပူလေးက အရမ်းပူရင် အစာရေမျိုကို ထိခိုက်နိုင်ပါကြောင်း…………..
Scalding Hot Tea May Boost Esophageal Cancer Riskhttps://www.webmd.com/cancer/news/20190320/scalding-hot-tea-may-boost-esophageal-cancer-risk Accessed Date 26 March 2019
Hot tea may raise esophageal cancer riskhttps://www.medicalnewstoday.com/articles/324771.php Accessed Date 26 March 2019
Does Drinking Hot Tea Increase Your Risk of Having Esophageal Cancer? We Asked an Experthttps://www.health.com/condition/cancer/hot-tea-esophageal-cancer Accessed Date 26 March 2019
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဟာ ဆီးချိုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား
စံပယ်ပန်း ရေနွေးကြမ်းရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံက